tọrọ ntọala : 1975
Echefukwala discuss Murdoch University
Murdoch University na-mba dị ka a nnyocha na-ada alụmdi na a mgbanwe obibia mmụta.
Anyị na ụmụ akwụkwọ na-arụ ọrụ n'akụkụ ọkachamara na-eme nnyocha mee ihe ndị kasị oké egwu zuru ụwa ọnụ nsogbu.
Anyị na-agụsị akwụkwọ na-achụso site azụmahịa na ụlọ ọrụ dị ka a n'ihi ihe ahụ elu-edu ezi ihe, multidisciplinary ogo n'ịgwa, -eduga ihu nnyocha na mkpa real-ụwa mmụta.
Na Murdoch University na Perth, Australia, anyị na-mpako na-enwe ihe karịrị 22,000 ụmụ akwụkwọ na 2,000 mkpara si gafee 90 mba dị iche iche na a ọchịchọ-achọpụta, eji ha na-eche n'ikpeazụ eme ka a dị.
Anyị nabatara free echiche na-agba ume anyị Murdoch obodo ịkọrọ echiche, ọdọ mmiri ihe ọmụma na-ahụ ụzọ ọhụrụ nke iche echiche. gafee Australia, anyị na-ghọtara maka magburu onwe izi, n'ala-agbasa nnyocha na anyị elu ọnụ ọgụgụ nke afọ ojuju ụmụ akwụkwọ.
Na Western Australia, anyị South Street campus nwere a nso nke ụlọ ọrụ gụnyere a keukwu pụọ n'ụlọ ọgwụ (na Wa nanị Equine operating ụlọ ihe nkiri), engineering pilot osisi, a chiropractic ọgwụ, Media Arts center na ndị ọzọ. Anyị na-enwe campuses na Singapore, na ncherita-iru National Library na-akụziri ehiwe, na na Dubai ebe anyị na ụmụ akwụkwọ na-eji ala-nke na-art TV na redio nka, newsrooms na-edezi oke ime ụlọ.
Anyị na-ghọtara dị ka otu n'ime Australia si eduga nnyocha oru, dị ka ihe industries-edebe ha kweere na ihe onwunwe anyị oru ngo-enye anyị na research aga ime na ndị ọkà mmụta sayensị na ohere ime ka ịtụnanya nchoputa.
Murdoch si ele ohere maka ụmụ akwụkwọ na-akụkụ na ụdị ụfọdụ nke ọrụ na-ahụmahụ dị ka ihe dị oké mkpa ụdị amụta integral ọ bụla nke anyị ọmụmụ. The University si Work Integrated Learning (chọrọ) -Achọ usoro na-enye ihe dị mkpa mmụta ahụmahụ maka ụmụ akwụkwọ, mgbe ohere ha na-egosi na ha gụsịrị akwụkwọ nkà n'ọrụ.
Ị chọrọ discuss Murdoch University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews